Uummanni Oromoo Maal Narraa Eegduu? – Welcome to bilisummaa
Uummanni Oromoo Maal Narraa Eegduu?
bilisummaa May 19, 2014	Leave a comment
Haasaya Muktaar Kediir!
Garatuu Harree Nabaachisee!
Lammii kootiin Diina na taasisee!
Diina kootiin fira na taasise!
Du’aa fi hidhaa laammiiwwan koo na dandeessise!
Kanatu Godinalee oromiyaa keessa na naannessee!
Barattoota fi dargaggoota oromoo rasaasa diinatin na harchaasisiise!
Isa kaanis osoo jiru jiraa isaa mana dukka lafa jalatti awwaalchisiise!
Anaa fi dhaabni koo OPDO teenne waa’ee garaa yaanna!
Waa’ee sabaa fi biyya keenyaa yaaduuf yoom yeero qabnaa!
Kanatu bada! kanatu! mishaa jenne filanno saba keenyaa!
Eegsisuu hangoos itti hin qabnuu nuu baraa!
kan dhaabbaneefis isiniifi miti garaa fi diina ta’uu baraa!
Nurraa waa tokkollee hin eeginaa isinumitti mala keessan malaa!
Nuti dalagaa keenya itti jira!
Ajjesisiisuu fi qalchiisuu!
Isa kaanis jiraa awwaalchisuu!
nuu milka’aa taanaan harree ofii baanne isinittis baachisuu!
Garaa keenya guunne isin agabuu bulchuu!
sabboontonni ilmaan Oromoo dubbisaa waliif dabarsaa! (like and share)
Previous Wallisaa Addisuu Karrayyuu; Niin fedha niin fedhaa, an niin fedhaa oromoon fedhaa
Next GUYYAA HAADHAA KAN BARNAA*
Nuti, hirmaattotni Yaa‘ii Gurmuu Hayyoota Oromoo (GHO) mata duree „Burjaajii Siyaasa ammee fi Carraa Hegeree …